သချာင်္ ဖော်မြူလာတွေထဲမှာ ၇ + ၉ ပြီးတော့ ၅ + ၂ × ၈ ဆိုတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ complex formula တွေလို့ ခေါ်တယ်။ အဲဒါတွေက ဘယ်ဂဏန်းကို အရင် တွက်ချက်ရမယ် ဆိုတဲ့ အစဉ်အတိုင်း လုပ်ရတာ ရှိလာတယ်။ order of operation လို့ ပြောပါတယ်။ မြန်မာလိုကတော့ ကွင်း၏မြှောက်စားပေါင်းနှုတ်လို့ ကျောင်းသားတွေက သိကြပါတယ်။ () ထဲကဟာကို အရင်တွက် ပြီးမှ ၏ ဆိုတဲ့ ထပ်ညွှန်းကိန်း (exponential) ကိုတွက်၊ ပြီးမှ * မြှောက် ၊ ပြီးမှ / စား၊ ပြီးမှ + ပေါင်း၊ နောက်ဆုံးမှ ဖော်မြူလာထဲမှာ - နှုတ်တာကို လုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။
အောက်ပါ Google Sheet မှာ ပစ္စည်း ၃ မျိုး ရဲ့ တခုချင်း ဈေး၊ အရေအတွက် နဲ့ ပစ္စည်းအလိုက် ကျသင့်ငွေကို ရိုးရိုးဖော်မြူလာနဲ့ တွက်ထားပါတယ်။ Line total တခုချင်းစီမှာ - d3 = b3*c3, d4=b4*c4, d5=b5*c5 နဲ့ တွက်ထားပါတယ်။ ပြီးတော့မှ d3, d4, d5 တွေကို ပေါင်း၊ နောက်တော့ အခွန်နှုန်း ၅.၅% - (မြှောက်ဖော်ကိန်း ၀.၀၅၅) နဲ့ ပြန် မြှောက်ပါတယ်။
ပြီးတော့ tax rateနဲ့ မြှောက် - $274.10*0.055.
အောက်မှာကတော့ line total လို့ခေါ်တဲ့ တခုချင်းစီ ကျသင့်ငွေကို မတွက်တော့ပဲ တခါတည်း သက်ဆိုင်ရာ ပစ္စည်း တခုချင်းဈေးနဲ့ သူ့အရေအတွက်ကို တခါတည်း မြှောက်၊ နောက်တခုကိုလည်း အရေအတွက်နဲ့ ဆက်မြှောက်ပြီး အားလုံးပေါင်း - subtotal တွက်တာကို ထည့်ကြည့်ရအောင်ပါ။
ပြီးတော့မှ မြှောက်လာဒ် ၂ ခု ကို ပေါင်း - 97.65+45.80.
press Enter ခေါက်လိုက်တဲ့အခါ အဖြေက - $143.45. ဖြစ်ပါတယ်။